संक्रमण घटे पनि जोखिम टरेको छैन - EKalopati
संक्रमण घटे पनि जोखिम टरेको छैन
नेपालमा संक्रमणले हुने सिकिस्त बिरामीको संख्या अस्पतालमा घट्दै गएको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणदर घट्दै गएको पछिल्ला तथ्यांकले देखाएका छन् । तर लकडाउन खुलेपछि कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. विराज कर्माचार्यले लकडाउन खुलेपछि संक्रमण बढ्न सक्ने सम्भावना औंल्याए । ‘तर यसअघिकै दरमा भने बढ्दैन’, उनले थपे । अहिले पनि केही जिल्लामा संक्रमणदर बढिरहेको र लकडाउनपछि ती ठाउँबाट मानिस सहरतिर प्रवेश गरेमा बढ्न सक्ने डा. कर्माचार्यको विश्लेषण छ । उनी धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत छन्
मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल संक्रमण घट्दै जानुमा आवात–जावतमा लगाइएको रोक नै प्रमुख कारण भएको बताउँछन्। संक्रमणदर घट्ने बित्तिकै निषेधाज्ञा खुल्ने हो भने गत वर्षकै जस्तो पुनः ह्वात्तै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । समाचार नागरिक दैनिकबाट ।
Previous articleखाने तेलको मूल्य थोरै घट्यो
Next articleओलीको अहंकार एकतामा बाधक